“အလှသိပ်မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ် ရုပ်ချောသူတွေဖြစ်ကြောင်း အချက် (၅) ချက်” - Real Gaming Myanmar
“အလှသိပ်မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ် ရုပ်ချောသူတွေဖြစ်ကြောင်း အချက် (၅) ချက်”
By thant naing /2months ago / Knowledge / No Comments
မိန်းကလေးတွေထဲမှာ အလှသိပ်မပြင်တတ်တဲ့ သူလေးတွေ ရှိပါတယ် .. .. ။မိတ်ကပ် tutorials တွေ ဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့်လည်း မပြင်တတ်၊ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဘာဝယ်လို့ ဝယ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတတ်ကြသူတွေပါ ….. ။ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ်ရုပ်ခံ အရမ်းချောနေလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေက သက်သေ ပြနေပါတယ်နော် …. ။
(၁) ပြင်လေ့ပြင်ထ မရှိဘူး
သိပ်အလှမပြင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အရင်ကတည်းက ပြင်လေ့ပြင်ထ မရှိတဲ့သူတွေပါ။ အလှပြင်ရတာကို စိတ်မဝင်စားတဲ့ သူလေးတွေမို့လို့ မပြင်ရင်း.. မပြင်ရင်းကနေ မပြင်တတ်တော့တာပါ …. ။ဒီလိုမျိုး မပြင်ရတာကလည်း မပြင်ရင်တောင် လှနေတဲ့သူတွေ မို့လို့ပါ …… ။
(၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတယ်
အလှမပြင်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိသူလေးတွေပါ။ သူတို့ဟာ မပြင်ရင်တောင် လှနေတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုသူတို့ ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ် …… ။ဒါကြောင့်မို့ပဲ သူများတွေ ဘယ်လောက်ပြင်ပြင် သူတို့က အေးအေးဆေးဆေး မျက်နှာပြောင်လေးနဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရှိ နေရင်းကနေ မပြင်တတ်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
အလှအပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အလှသာမပြင်တာ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုတော့ အရမ်းရှိကြတဲ့ သူတွေပါ ….. ။သူတို့အတွက် မိတ်ကပ်တွေ၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ခြယ်သရတာထက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ ရိုးရိုးလေးနေရတာကို ပိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
ဒီလို မိန်းကလေးတွေရဲ့အလှက သဘာဝဆန်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပင်ကိုယ်အတိုင်း နေတတ်သူတွေမို့ သူတို့ဟာ ကြည့်ရတာ မျက်စိပသာဒ အေးမြကြပါတယ် …. ။သူတို့တွေဟာ သဘာဝဆန်ဆန်လေး လှတဲ့သူတွေမို့လို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှစစ်စစ်ကို ပုံဆောင်ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် …… ။
(၅) ပြင်လိုက်ရင် သူများထက်ပိုလှတယ်
မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ မိတ်ကပ်မလိမ်းပဲ သဘာဝအတိုင်း နေတတ်ကြတဲ့ သူတွေဖြစ်တဲ့ အလျောက် သဘာဝအတိုင်းလည်း လှပြီးသားဖြစ်ပါတယ် …. ။ဒီလို မိန်းကလေးတွေဟာ ပြင်လိုက်ဆင်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း ပြင်နေကြ လူတွေထက် ပိုပြီးလှကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ မပြင်ပဲနဲ့တောင် လှပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ …. ။
မိနျးကလေးတှထေဲမှာ အလှသိပျမပွငျတတျတဲ့ သူလေးတှေ ရှိပါတယျ .. .. ။မိတျကပျ tutorials တှေ ဘယျလောကျကွညျ့ကွညျ့လညျး မပွငျတတျ၊ အလှကုနျပစ်စညျးတှေ ဝယျမယျဆိုရငျတောငျ ဘာဝယျလို့ ဝယျရမှနျး မသိဖွဈနတေတျကွသူတှပေါ ….. ။ဒီလိုမိနျးကလေးတှဟော ပငျကိုယျရုပျခံ အရမျးခြောနလေို့ ဖွဈတယျဆိုတာ ခုဖျောပွမယျ့ အခကျြလေးတှကေ သကျသေ ပွနပေါတယျနျော …. ။
(၁) ပွငျလပွေ့ငျထ မရှိဘူး
သိပျအလှမပွငျတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော အရငျကတညျးက ပွငျလပွေ့ငျထ မရှိတဲ့သူတှပေါ။ အလှပွငျရတာကို စိတျမဝငျစားတဲ့ သူလေးတှမေို့လို့ မပွငျရငျး.. မပွငျရငျးကနေ မပွငျတတျတော့တာပါ …. ။ဒီလိုမြိုး မပွငျရတာကလညျး မပွငျရငျတောငျ လှနတေဲ့သူတှေ မို့လို့ပါ …… ။
(၂) ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိတယျ
အလှမပွငျတတျတဲ့ ကောငျမလေးတှဟော ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ရှိသူလေးတှပေါ။ သူတို့ဟာ မပွငျရငျတောငျ လှနတေယျဆိုတာ သူတို့ကိုသူတို့ ကောငျးကောငျးသိကွပါတယျ …… ။ဒါကွောငျ့မို့ပဲ သူမြားတှေ ဘယျလောကျပွငျပွငျ သူတို့က အေးအေးဆေးဆေး မကျြနှာပွောငျလေးနဲ့ ယုံကွညျမှုရှိရှိ နရေငျးကနေ မပွငျတတျတော့တာ ဖွဈပါတယျ …. ။
အလှအပွငျတတျတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော အလှသာမပွငျတာ တဈကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးမှုတော့ အရမျးရှိကွတဲ့ သူတှပေါ ….. ။သူတို့အတှကျ မိတျကပျတှေ၊ နှုတျခမျးနီတှနေဲ့ ပွငျဆငျခွယျသရတာထကျ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျးနဲ့ ရိုးရိုးလေးနရေတာကို ပိုကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ သူတှပေါ။ သူတို့ကို ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခါတိုငျး သနျ့ရှငျးသပျရပျနမှော ဖွဈပါတယျ …. ။
ဒီလို မိနျးကလေးတှရေဲ့အလှက သဘာဝဆနျပါတယျ။ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပငျကိုယျအတိုငျး နတေတျသူတှမေို့ သူတို့ဟာ ကွညျ့ရတာ မကျြစိပသာဒ အေးမွကွပါတယျ …. ။သူတို့တှဟော သဘာဝဆနျဆနျလေး လှတဲ့သူတှမေို့လို့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ အလှစဈစဈကို ပုံဆောငျကွသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ …… ။
(၅) ပွငျလိုကျရငျ သူမြားထကျပိုလှတယျ
မပွငျတတျတဲ့ မိနျးကလေးတှဟော မိတျကပျမလိမျးပဲ သဘာဝအတိုငျး နတေတျကွတဲ့ သူတှဖွေဈတဲ့ အလြောကျ သဘာဝအတိုငျးလညျး လှပွီးသားဖွဈပါတယျ …. ။ဒီလို မိနျးကလေးတှဟော ပွငျလိုကျဆငျလိုကျတဲ့ အခါမှာလညျး ပွငျနကွေ လူတှထေကျ ပိုပွီးလှကွပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ မပွငျပဲနဲ့တောငျ လှပွီးသား ဖွဈနလေို့ပါ …. ။
Previous: အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ချေ ၅ ဆ အထိ တိုးလာနိုင်
Next: သင်္ကြန်တွင်း မြန်မာပြည်အနှံ့မှ အုပ်စုလိုက် လူရိုက်ပွဲ သတ်ပွဲများ